चोलेन्द्र प्रकरणमा नयाँ टुइस्ट ,डा केसीलाई कसले दियो यति गम्भिर सूचना ? - jagritikhabar.com
चोलेन्द्र प्रकरणमा नयाँ टुइस्ट ,डा केसीलाई कसले दियो यति गम्भिर सूचना ?
चर्चित राजनितिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतमा कोत पर्व मच्चीन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
ओटीभी नेपाल डट कमसगँको विशेष कुराकानीमा विश्लेषकले डा कसीले प्रधानन्यायाधिश राणाको छोरो हो कोत पर्व मच्चाइदिए भने यिनले के गर्छन् ?भन्ने प्रश्न गरेका छन् । न्यायालयमा अहिले देखीएको समस्याको सहज निकास नभएको पनी डा केसीले बताएका छन् ।
चोलेन्द्रले यहि बेला बालुवाटारको फैसला गरिदिएर बावुराम र माधव नेपाल जे ल जाने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? क्यान्टनमेन्टको र अग्नी सपाकोटका फैसला गर्दिए भने के हुन्छ? डा केसीले यसैलाई सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्ने कोत पर्व भनेका छन् ।
अहिले सम्म सर्वोच्च अदालतमा माओवादीको एक जना पनी न्यायाधिश नभएका कारण उसलाई अभाव खड्कीएर यस्तो भएको केसीले बताए । एक जनाको कोटा खाली गराउँन पाइयो भने आफ्नो मान्छे त्यहाँ पुर्याउँने डिजाइनमा खेल भएको उनको मत छ ।